Lidla uhlobo ingxolo Phantsi - China Ningbo Hicon Industry
Tsalela Us: 0086 574 62132957
Uphahla efakwa AC
Air luthando duct Split lohlobo AC
Air Chiller amanzi iphela
Amanzi iphela Water Chiller
Skrola Water Chiller
iqhosha lemenyu INew Water Chiller
Water Source Ubushushu Pump
Amanzi ku sokumpompa ubushushu Air
Amanzi ku empompa ubushushu amanzi
Evaporative Uhlobo Water Chiller
Unit Hot Air Source Total Heat Recovery Water wesiFudumezi
Wasendlini swimming pool AC unit
Air luthando Floor Standing AC
Water Unit iphela
Amanzi iphela zahlanganiswa AC
Unit Telecom Ekupholiseni
unit epholile kwisiseko sesikhululo
Unit Crane Cab kupholile
Unit Standing Floor Split
Split Wall unit imvelaphi inyuselwa khona
unit nophahla inyuselwa zahlulwe
ukusebenza High crane A / C unit
Elisezantsi Temp-ulwelo chiller
chiller amanzi Temp eliphezulu
Marine & HVAC offshore
AC Ukujiya Unit
Unit Air Ukuphathwa
Unit Package AC
Air luthando Self eziqulethwe AC
Amanzi iphela, Self eziqulethwe AC
Air igwebu zahlanganiswa AC
Unit Ukunikezela Ukujiya
Unit Air kupholile
Fan Ikhoyili Unt
Fan Ikhoyili Unit
Unit Horizontal Wobuncwane
Unit Horizontal Ukubhencwa
Nkqo wafihla Unit
Unit mpo Ukubhencwa
Wall Unit Onyuswe
Nophahla Unit Wobuncwane
Nophahla Unit Ukubhencwa
AC Ubushushu umzimba
uhlobo umsindo kakhulu Phantsi
Nophahla Marine kufihlwa Fan coil Unit Hisurp liqulunqe series ezahlukeneyo Fan Ikhoyili Unit ukuqinisekisa kubekho eliphezulu-grade phantsi eziphila elwandle. Ukusuka elikhulu ukuba iinqanawa zabarhwebi encinane, imifuziselo ezahlukeneyo ziyafumaneka kwizicelo, ukwanelisa uluhlu olubanzi kwamandla Ukupholisa ezifunekayo kunye nemithombo amandla asetyenziswa ehlabathini lonke. Le ndawo nobungcali unika Hisurp kwincam kweli candelo loshishino. Oku kufihlwa fan coil series oxwesileyo iye yaphuhliswa ukuze ac ...
Nophahla Marine Unit ifihliweyo Fan coil
Hisurp liqulunqe series ezahlukeneyo Fan Ikhoyili Unit ukuqinisekisa kubekho eliphezulu-grade phantsi eziphila elwandle. Ukusuka elikhulu ukuba iinqanawa zabarhwebi encinane, imifuziselo ezahlukeneyo ziyafumaneka kwizicelo, ukwanelisa uluhlu olubanzi kwamandla Ukupholisa ezifunekayo kunye nemithombo amandla asetyenziswa ehlabathini lonke. Le ndawo nobungcali unika Hisurp kwincam kweli candelo loshishino.
Oku kufihlwa fan coil series oxwesileyo iye yasungulwa ukuze kuphunyezwe intuthuzelo enkulu kunye nokusebenza amandla ngokusemthethweni ingxolo ngenkankulu ukuba afumane ngeeyunithi eqhelekileyo terminal lomoya (uphuphu, fan jiko). ukusebenza kwayo kwenza i mveliso ilungele naluphi na ufakelo efuna ukungqinelana nemigaqo engqongqo amanqanaba ingxolo. Uphononongo ngononophelo a plenum ehlanganisiweyo suppressor kunye nokusetyenziswa ubushushu ethile (isetyenziswe ipholiyesta ifayibha) isandi eliphezulu ukufunxa.
iyahlala Excellent eyenzelwe ngokukodwa izicelo zaselwandle
design ubunzima Light
Wide uluhlu operation
iindawo ukuguqulwa oluninzi ukuqinisekisa izicelo ezahlukeneyo
zokuhamba Easy and umsebenzi wofakelo
Stainless drip pan ne 25mm ubude
- Yonke imikhombe kungakhathaliseki ezintsha okanye ezindala
- iiyunithi ezincinci ukuze ekharejini ndaze injini igumbi
Previous: Uhlobo Ordinary
Okulandelayo: Floor Standing
Marine Ekupholiseni Fan Ikhoyili
Marine Ekupholiseni Fan okuzingela
Marine Fan Ikhoyili
Fan Ikhoyili Unit Marine
Marine Fan okuzingela
Unit Fan Ikhoyili Marine Fonts
Unit Imvume Fan Ikhoyili